Maruva eimba - Hoya kana Porcelain Ruva | Art sens - mazano eimba nebindu
Maruva eimba - Hoya kana Porcelain maruva
09.03.2019 Yakatumirwa na: Art Sense
Pfungwa Pamba, Zvirimwa, Maruva eimba
Imwe yemaruva akanaka kwazvo emukati ndiyo Hoya (inonzi zvakare Porcelain ruva kana Wax chirimwa). Iri boka rinosanganisira nezve 300 vamiriri veGenus Oleander (Apocynaceae), vanobva kuAsia neAustralia. Ehe, vashoma chete avo vakakura vari kumba, asi vanokoshesa zvakanyanya kune yavo inooneka waxy coating uye kunhuhwirira kwakanaka kwemavara. Kazhinji, iwo akajeka epink, asi anogona kubva kubva kunoyera kusvika dema tsvuku, anenge dema. Iwo akacheneruka uye akaiswa mapoka mumatsotsi. Vamiriri vakakurumbira ndi Hoya carnosa, Hoya kerrii, Hoya linearis, Hoya multiflora, Hoya cumingiana, Hoya mindorensis, Hoya pubicalyx, Hoya Shepherdii, Hoya lacunosa, Hoya australis nevamwe. Sezvakaita Orchids и PineappleHoya is epiphyte - inorarama yakanamatira kune chipenyu chipenyu isina kusvinwa nayo - inoisa midzi mune bark remuti, asi ichidyiwa nharaunda (mhepo, mvura, zuva). Muzviitiko zvisingawanzo, iyo inokura semumiriri shrubby wepasi, uye dzimwe nguva munzvimbo dzine matombo. Iyi mizvinwa inogara iriko inosvika saizi kubva ku1 kusvika 20 mamita, ichibva nekukwira nemidzi yayo. Mashizha ane nyama, akarongedzwa zvakapindirana, uye akatwasuka kana mossy, aine huwandu hwemarudzi akafukidzwa nechena, marble madhiza.
Maruva anokura pamatavi anova anorembera uye akareba nemhando imwe neimwe inoyerera. Chimiro chemuvara uyu chinowanzo nyeredzi nemashanu ane nyama, waxy uye yakakora peturu yakafukidzwa nekorona yeimwe chikamu chine nyeredzi. Pamusoro pekunhuhwirira, kazhinji hoi zvakare inogadzira nectar.
Ruva harigone kuchinjika kwazvo nekushisa kwakanyanya uye kumba chirimo chakanyanya chiri pakati pe18 ne25 madhigirii, uye munguva yechando zvakanaka kuti uende kukamuri rine kupisa pakati pe12 uye 16 degrees. Chero iwo mafunde kana kamwe kamwe tembiricha inoputika inoita kuti mamwe mashizha adonhe.
Iyo hovhah inoshongedza nyore nyore kumunyoro uri mukamuri, asi kufanana nemhando dzese dzayo yakaenzana, inopindura zvakanaka kwazvo kupururudza nguva nenguva. Nekudaro, izvi hazvifanirwe kuitwa panguva inoyerera. Izvo zvinodikanwa kupukuta mashizha nokungwarira kana uchizviputira.
Kudiridza hovhora hakufanirwe kubvumira mvura kuti ichengeterwe muhari, ichengetedze iyo substrate yakanyorova kuburikidza neari kamwe chete kana maviri mvura pasvondo nemvura yakapfava uye yakasimba kwenguva yakati.
Fertilization ndeye kubva munaKurume kusvika Gumiguru - kaviri pamwedzi nehuwandu hwezvicherwa hwakawanda hwakadururwa muvhu, asi kure nemidzi yemuti.
Hoya ane hutachiwana hwakanaka uye haabatwe nechirwere, asi muzviitiko zvisingawanzo anogona kuve nehutachiona hwefungal. Pamazuva akaoma ezhizha, zvinokwanisika kuti chirimwa chirwiswe nezvipembenene zvakasiyana, zvichida kupindira kunodzivirira. Iko kubuda kwematenderedzwa (nematode) kunogona kukoshesa kucheka nekuparadza nzvimbo dzakakanganisika, kutsiva ivhu, incl. uye kusawirirana kweiyo sanction.
Kuchengeta hay kunokwanisa kuvandudzwa nekutarisa zviratidzo zvehunhu - kukura zvishoma uye mashizha asina kusimba zvinoreva kushomeka kwezvikamu pakati, kuoneka kwemavara pamashizha chiratidzo chekushomeka kana kuwandisa kwechiedza, uye yero kuita semhedzisiro yefivhiri yakanyanya.
Pazvakawanda, hovhah blooms seamless, asi inogona kuve kana ichidikanwa inomutsa nemvura inodziya senge maOrchidspamwe nekuinyudza muhari yemvura inodziya kweinenge awa nehafu.
Iyo hibernation inofanira kunge iri munzvimbo inotonhorera uye haifanire kutakurwa kana mabhureki paonekwa.
evergreen houseplants, kutarisira maruva, maruva exotic, mavara akanaka, maruva akanaka, maruva eimba, Hoya, Hoya Ruva, maruva, maruva eimba anoyerera, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Zviitire wega wakasarudzika mhizha
Kuzviitira iwe yakasarudzika, inoshamisa inoyevedza fashoni accessory kunge bracelet iri ...
Camellia imwe yezvakanaka kwazvo zvidyarwa zvose semaruva edzimba uye s ...
Oleander kana Zocum (Nerium oleander) rudzi rwakapararira rwebindu uye maruva emukati ...
Idzi mota dzakabvira kare kurasikirwa chinangwa chavo chekutanga, asi inyanzvi ...